Martial oo kahor kulanka PSG ka hadlay farqiga u dhexeeya macalimiinta Solskjær iyo Mourinho – Gool FM
(Manchester) 11 Feb 2019. Weeraryahanka Manchester United Anthony Martial ayaa xaqiijiyay in sii joogi taanka tababare Ole Gunnar Solskjær xili ciyaareedka soo aadan uusan ahayn go’aan ku xiran ciyaartoyda.
Dhinaca kale Anthony Martial ayaa wuxuu ka hadlay farqiga u dhexeeya Ole Gunnar Solskjær iyo Jose Mourinho.
Martial ayaa u arka in ciyaartoyda kooxda Manchester United ay haatan bandhig wanaagsan ka hoos sameenayaan tababare Solskjær, marka loo fiiriyo waayahoodii Jose Mourinho.
“Solskjær wuxuu ka duwan yahay Mourinho, shaqadeena waa inaan isku dayi karno inaan sameyno waxa uu doonayo, waxaana laga yaabaa inay taasi ay haatan inoo sahlan tahay, wax walba haatan way soo fiicnaanayaan”.
“Waxaan rajeyneynaa inuu nala sii joogi doono tababare Ole Gunnar Solskjær, laakiin go’aanka ma ahan mid ku jira gacmaha ciyaartooyda”.
“Waxa ugu horeeya uu iga codsaday ayaa ahaa inaan weerar xoogan sameeyo, isla markaana aan go’aan adag ku hor gaaro goolka kooxaha naga soo hor jeeda”.